आहा ! श्वेता खड्का र विजेन्द्रले यसरि रमाइलो गरेको भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुस् भिडियो ) - Public 24Khabar
Home Entertainment आहा ! श्वेता खड्का र विजेन्द्रले यसरि रमाइलो गरेको भिडियो भयो भाइरल...
नायिका श्वेता खड्कालाई निकै लामो समयपछि हामिले सामाजिक संजालमा खुसि भएको देख्न पाइरहेका छौ ।
कहाँ भेटिएला, कोहिनुर, कान्छी, लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेरकी सामाजिक अभियन्ता समेत रहेकी नायिका श्वेताले धनगढीका प्रेमी विजयन्द्र सिंह रावतसँग विवाह गरिन ।यो उनको दोस्रो विवाह हो ।
Previous articleघरमा श्री’मती र दुई सन्तान हुँदाहुँदै फेरि 15 वर्षिय यु,वतीलाई लिएर भागेपछि घरको श्री’मतीको यस्तो वि,जोग (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
Next articleआहा ! यसरी भव्य तरिकाले मनाईयो भगवान् बिनोद र अनिताको छोरिको जन्मदिन (हेर्नुस् भिडियो )